कोभिडको मारमा बालबालिका र हाम्रो भूमिका - Pradesh Today कोभिडको मारमा बालबालिका र हाम्रो भूमिका - Pradesh Today
कोभिडको मारमा बालबालिका र हाम्रो भूमिका
कोभिड–१९ का कारण अहिले विश्व नै त्रसित छ । विश्वको शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रहरू सबैलाई यसले असर पारिरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै लकडाउनको अवधि पनि बढ्दै गइरहेको छ । यसको असर सबै उमेर समूहलाई परेको देखिन्छ । तर सबैभन्दा बढी जोखिममा भने बालबालिकाहरू रहेका छन् ।
कोरोनाका कारण बालबालिकाहरूले शिक्षा लिने र खेल्ने वातावरण पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ बालबालिकाका खोप कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हामीले देख्दै आएका छौं । अब अविभावकहरू पनि आ–आफ्नो काममा फर्कदै छन् । जसका कारण बालबालिकाहरू घरमा एक्लै बस्न बाध्य छन् ।
कोरोनाभाइरसका कारण दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेकै हामीले सुन्दै आएकैै हो । त्यसका साथै बालबालिकाहरू पनि यसको संक्रमणबाट मुक्त छैनन् ।
तर नेपालको संक्रमणको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अन्य उमेर समूहभन्दा बालबालिकाको संक्रमण दर भने केही कम रहेको छ । तैपनि केही बालबालिकाहरू क्वारेन्टाइनमा छन् भने केहीआइसुलेसनमा पनि । जसमध्ये ६ महिने शिशु पनि रहेको हामीले समाचार सुनेकै हो ।
स्थानीय सरकारसँग संक्रमण बढ्दै गएपछि बालबालिकालाई कसरी राख्ने र उनीहरूको कसरी उपचार गर्ने ? भन्ने कुनै ठोस योजना छैन् । भएका क्वारेन्टाइन र आइसुलेसन पनि बालमैत्री छैनन् । स्थानीय निकायमा बालबालिकाका लागि आएका लाखौ बजेट कहाँ जान्छ ?
भन्ने अत्तोपत्तो हुँदैन् । बालमैत्री स्थानीय शासनका नारा पनि नारामा मात्र सीमित रहदै आएका छन् । तर अब भने संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइन, आइसुलेसन र अस्पतालहरू बालमैत्री बनाउन जरूरी छ ।
अहिले त केही बाल–बालिकाहरूलाई गाउँघरमा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका काममा सरिक गराइएको पनि पाइएको छ । कोही पैसा कमाउने लोभमा साथीभाइको संगतमा लागेर र कोही बाध्यताले त्यस्ता काम गर्न बाध्य छन् । किन यसरी लागिरहेका छौं ?
भन्दा उनीहरूको एउटै उत्तर हुन्छ घरमा बसेर के गर्ने उमेरले खान दिदैन विद्यालय पनि सञ्चालन छैन के गर्नु त । एकातिर कोरोना संक्रमण त छदैछ, त्यसैमा बालश्रम पनि बढिरहेको छ ।
त्यसका साथै यौन दुब्र्यवहार र बालहिंसा पनि बढिरहेका छन् । जसको रोकथामका लागि स्थानीय निकायले स्पष्ट नीति तथा निर्देशन अनुसार निगरानी गर्न जरूरी छ । अनि अर्कोतर्फ अभिभावकलाई रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
कोरोनाभाइरसका कारण केही स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका समाचार सुन्दै र देख्दै आएका छौं । जसको असर बालबालिकामा अवश्य परिरहेको छ । यदि स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा त्यो कार्यलाई सुचारू गर्न सक्दछ ।
संक्रमितको अवस्था अनुसार क्षेत्र छुट्टाएर सामाजिक दुरी कायम गरेर घरदैलो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा दिन सकिन्छ र विद्यालय सञ्चालन नभएता पनि संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सावधानी अपनाई एउटै टोलमा रहेका बालबालिकाको समूह बनाई सम्बन्धित टोलकै शिक्षकहरू परिचालन गरी समुदायमा बैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्दछौ ।
बालबालिकाहरू भावनात्मकका साथै जिज्ञासु पनि हुन्छन् । त्यसैले यो अवस्थामा उनीहरूको विशेष ख्याल गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरूलाई भावनात्मक असर नपुगोस् र उनीहरूको जिज्ञासामा पनि कमि नआओस् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि बालबालिकालाई कोरोनाभाइरससम्बन्धी डराउने कुराहरू र डराउने व्यवहार नदेखाउन आग्रह गरिरहेको छ ।
तर अहिले पारिवारिक र सामाजिक अवस्थाले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर परिरहेको छभन्दा अनुपयुक्त नहोला । विभिन्न खबरहरू सुन्दा र हेर्दा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले उनीहरूलाई आवश्यक मात्र सूचना दिएर हात धुने, मानिसहरूसँग दुरी कायम गर्ने जस्ता व्यवहार सिकाउनु पर्दछ ।
अहिले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेकाले बालबालिकाहरू पनि घरमै रहेका छन् । विद्यालय नजाँदा र घरभित्रै थुनिएर बस्दा बालबालिकालाई नकारात्मक असर अवश्य पुगेको हुन सक्छ ।
त्यसको ख्याल राख्दै अविभावकले उनीहरूलाई सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्दछ । यसका साथै बेला–बेलामा मनोरञ्जन गराउने, उनीहरूलाई चाँख लागेका कुराहरूमा प्रोत्साहन गर्दै हामीहरूले घरमा बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।
बालबालिकाहरू भोलिका कर्णधारहरू हुन् । भोलि उनीहरूको भविष्य कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा आज हाम्रो हातमा रहेको छ । त्यसैले यस महामारीको समयमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तर बालबालिकाहरूलाई यस अवस्थामा हुन सक्ने घरेलु, लैङ्गीक तथा यौन हिंसाबाट जोगाउनुपर्दछ ।
जसका लागि अभिभावक तथा समुदायलाई बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सचेत बनाउनुपर्दछ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, बालबालिकाहरूका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
विकासको पर्खाईमा कोइलाबास
योग शिक्षकलाई तालिम
नयाँ विद्यार्थीलाई डिभाईनमा स्वागत